iPhone 7 Atụmatụ na ụdịdị: 10 Ihe Anyị Chọrọ Lee na iPhone 7 / iPhone 6s
iPhone 6s (Plus) Atụmatụ na ụdịdị: 10 Ihe Anyị Chọrọ Lee na iPhone 6s (Plus)
Dị ka ụbọchị ọ bụla na-aga, anyị na-nso ka nwere ntọhapụ nke iPhone 6s (Plus). Ọzọkwa, ụbọchị ọ bụla anyị na-enweta ihe na ọzọ ozi ọma banyere atụmatụ ndị a ngwaọrụ nwere ike. Raara iOS ngwaọrụ ọrụ na-enweghị ndidi na-echere a na ozi ọma na ntọhapụ nke ọzọ ọgbọ nke smartphones. Ka ọ dịgodị, ndị a ọrụ achọpụtawo ụzọ na-eme ka-arịọ, kpọtụrụ Apple ma na-atụle on forums-ekwe omume ọhụrụ atụmatụ nke ndị a na ngwaọrụ. Lee ndị 10 Ihe ọrụ chọrọ ọhụrụ iPhone 6s (Plus) inwe.
1. ogologo ndụ batrị
Apple esesịn kwere nkwa na ngwaọrụ dakọtara na iOS 9 ga-esi ka mma na ogologo ndụ batrị. Ma, ihe ọrụ na-chọrọ bụ n'ụzọ nkịtị ibu batrị na iPhone 6s (Plus). iPhone 6 na iPhone 6 gbakwunyere na-ama nnọọ mkpa. Anyị na-adịghị mkpa slimmer ngwaọrụ. Kama nke ahụ, ndị mmadụ chọrọ Apple iji na free ohere na-emepụta ibu batrị ga-adịru ogologo oge.
2. Ikuku Nchaji
Ka-arapara n'ahụ batrị a bit ọzọ. Naa iOS na ngwaọrụ ndị otú elu. Ya mere, gịnị ga-bụghị mmepe na-enye ha wireless Nchaji? Ọrụ nke nwere otutu iOS ngwaọrụ na-mgbe niile fumbling gburugburu na otutu cables na plọg. Ha ga-abụ otú ala ọ bụrụ na ha nwere ike dị nnọọ dobe ha ekwentị na a Nchaji na mpe mpe akwa ka ọ na-eme ihe niile na-arụ ọrụ. Apple jisiri agụnye wireless Nchaji na ya Apple Watch, ya mere ndị mmadụ kwenyere na ọ bụ omume na ndị ọzọ iPhone 6s (Plus).
iOS ọrụ yiri ka nwere ọtụtụ mkpesa mgbe ọ na-abịa iPhone batrị. iPhone ọrụ na-eleghị anya ekworo nke Android ọrụ, ebe ọ bụ na ha na-eme nwere replaceable batrị. Gịnị ga-ihe iPhone mkpa replaceable batrị? Ọfọn, doro anya, ọ ga-eme dochie batrị mfe na iPhone si nnọchi okirikiri ga-ogologo.
4. Pressure mmetuta ihuenyo / Force Touch ihuenyo
5. safaya Glass
Ugbu a, sapphire iko-a buu nweta nkwalite. Ị ga-nụrụ nke ma safaya Glass na ozodimgba iko, nri? Ọfọn, ozodimgba iko ọzọ bụ na-eguzogide ọgwụ mgbe ọ na-abịa na-atụnye ekwentị gị, ma safaya ọzọ bụ ọkọ eguzogide ọgwụ karịa mbụ na-eji Corning si ozodimgba iko. Apple etinye safaya Glass na igwefoto na Apple Watch, na ugbu a na ndị mmadụ chọrọ ịhụ ya na ngosipụta kwa. N'ezie, ndị mmadụ na-eche mmefu n'uche otú ha tụrụ aro ka iko adịghị ga-abụ dị ọcha sapphire iko. The iko ihuenyo nwere ike ịnwe a oyi akwa nke sapphire laminate n'elu. Nke a ga-melite ọkọ na-eguzogide ma na-eri obere, kwa.
6. Faster Touch ID
Onye ọ bụla na-ekweta na Touch ID bụ ihe ịtụnanya atụmatụ, na o si arụ ọrụ mara nke ọma kwa. Ma, onye ọ bụla ekweta na ibe ihe - Touch ID nwere ike ịbụ ntakịrị ngwa ngwa. Usoro nwere ike ịbụ tedious ma ọ bụrụ na ị na-eme ihe karịrị otu ma ọ bụ abụọ mkpịsị aka n'otu oge ahụ. Ọzọkwa, ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na ịtụnanya Apple nwere ike ibelata oge Touch ID na-ewe iji Ị kpọghee ekwt ngwaọrụ gị, ikike a zuo ke App ụlọ ahịa, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ maka a zuo site Apple Ṅaa. Ugbu a, ga-eme ka iPhone 6s (Plus) nnọọ ebube.
7. Improved Igwefoto na Ọzọ Igwefoto Atụmatụ
iPhones nwere a mara ezigbo mma igwefoto, ma e nwere ụfọdụ ọhụrụ atụmatụ iOS ọrụ chọrọ si ọzọ version nke iSight igwefoto. Ihe onye ọ bụla chọrọ bụ mma oyiyi mma. Ọ dịghị, anyị na-adịghị na-arịọ maka ihe megapixels. Anyị na-arịọ maka dị mfe ihe, dị ka ngwa anya image stabilization on iPhone 6s. Ọ ga-abụ na-ịtụnanya ma ọ bụrụ na ọrụ nwere ike idekọ na 4K, ma ọ bụ nwere ọbụna iji nwayọọ nhọrọ maka ngwa ngwa ngagharị ndekọ. Ọzọkwa, ọ ga-abụ ma ọ bụrụ na jụụ igwefoto oghere nọdụ iwepụ na ekwentị ahụ, ebe ọ bụ na, ị maara, ọ bụghị mmadụ na-eji a ikpe.
The iPhone 6 igwefoto dị ukwuu, iPhone 6 Plus igwefoto bụ ịtụnanya, ma e nwere ugbua ụfọdụ asịrị ihe nwere ike na iPhone 6s (Plus) igwefoto ka. Dị ka ọhụrụ asịrị, John Gruber, onye na nyocha na ihe ndị magburu onwe track ndekọ, aro na-eme ka nnukwu igwefoto na-awụlikwa elu na akụkọ ihe mere eme nke iPhone, na-esote iPhone. Dị ka Gruber, iPhone 6s (Plus) kwesịrị nwere ọhụrụ abụọ-oghere usoro nke ga-ewegharakwa "DSLR-edu imagery." Ichetụ n'echiche ike nke a DSLR igwefoto na ekwentị gị.
8. Nta ihuenyo
Ị nwere ike adịghị kwere anyị mgbe anyị na-agwa gị nke a, ma ọ bụ eziokwu. Ọtụtụ ndị ga-amasị-esote iPhone nwere nta ihuenyo. Onye ọ bụla mere mkpesa banyere obere size nke iPhone 5, tụnyere ndị size nke ihuenyo nke Android ngwaọrụ. Ma, mgbe iPhone 6 e wepụtara ọtụtụ ndị, karịsịa ndị na obere aka, chọtara ya buru nnukwute ibu.
O doro anya na, e nwere ụfọdụ asịrị na iPhone 6s (Plus) nwere ike a 4-anụ ọhịa ihuenyo. Na-ọzọ kpọmkwem, na ihuenyo pụrụ mbio 4.7 anụ ọhịa ka 5.5 anụ ọhịa, wee buru ibu ekwentị hụrụ na-adịghị na-echegbu onwe.
9. 32GB Nchekwa
Ka banyere Mr. John Gruber onye ọzọ oge. Mgbe iPhone 6 pụtara, o nwere naanị otu ajụjụ: Olee ebe bụ 32GB nlereanya?
O doro anya na, a ọtụtụ ndị na-ekweta na Gruber. Na ndị niile na mmelite, backups, oyiyi na video, 16 GB ezughị. Apple, anyị mkpa karịa ohere na iPhone 6s (Plus)!
10. mbughari Nchekwa
Lee, anyị bụ ọzọ na ohere nchekwa. Ok, otú ahụ kemgbe 16 GB bụ ezughị na Apple ma eleghị anya pụrụ ekeghị 32 GB iPhone 6s (Plus), mgbe ahụ ndị mmadụ dịkarịa ala chọrọ ikike iji mbughari nchekwa. Ọ bụ ezie na, nke a bụ nnọọ eleghi anya, ọ bụ ka o kwere omume.
Ndị a bụ ndị 10 atụmatụ ndị na-elekọta ndị kasị banyere. Kedu maka gị? Nke atụmatụ otú ị na-eche banyere ihe ndị kasị? Bụ n'ebe ọzọ mma na ị na-eche banyere anyị, ma anyị kwughị banyere ya?
> Resource> iPhone> iPhone 6s (Plus) Atụmatụ na ụdịdị: 10 Ihe Anyị Chọrọ Lee na iPhone 6s (Plus